Waa maxay Hantiwadaag “Socialism”? – Kaasho Maanka
Inkastoo uusan hanti-wadaagu lahayn micna qeexan oo laysla wada yaqaan ama la isku wada raacsan yahay, hadana micnahiisa guud wuxuu noqon karaa in bulshadu wada yeelato hantida iyo wax soosaarka guud. Sida ilaha wax soosaarka, warshadaha, beeraha iyo khayraatka dabiicigaa. Hanti wadaaggu wuxuu taariikh ahaan soo jiray muddo dheer laga soo bilaabo ilbaxnimadii Giriigga iyo tii Peershiya hayeeshee wuxuu si fiican usoo ifbaxay ka gadaal kacaankii warshadaha “Industrial evolution” qarnigii 18aad. Markaas oo dadka xoogsatada warshadaha ka shaqeeya soo bateen, isla waqtigaas oo hadana saboolnimada dadka xoogsatadaa sii korortay halka dadka warshadaha leh ay hodan sii noqdeen. Taas oo keentay qaybtii hore ee qarnigii 19aad aqoonyahaniintii noolaa inay isku dayeen inay xal u helaan dhibaatadii ka dhalatay kacaankii warshadaha. Aqoonyahaniintaas waxaa kamid ahaa Roberto Owen, Henri de saint-simon, Charles Fourier iyo Karl Marks. Sikastaba ha ahaatee, aqoonyanadaas aan kor ku xusay ayaa uga hadlay ama usoo bandhigay siyaabo kala duwan sida uu noqon karo hanti wadaaggu. Taas oo keentay inay soo baxaan qaybo badan oo kala duwan oo hanti wadaaga. Hayeeshee hanti wadaagga maanta layaqaan waxaa ugu muhiimsan labo qaybood oo kala ah “Democratic Socialism” iyo “Communism Socialism” ama Revolutionary Socialism.
Hadaba waa maxay “Democractic Socialism”?
Habkaan dhaqaale wuxuu ogolaanayaa in dadku yeeshaan hantidooda gaarka hayeeshee waxsoosaarka guud iyo khayraadka dabiiciga waa hanti-wadaag bulshadu wada leedahay waxaana maamulaysa dawlad ku timid hab dimuqraadi ah, iyadoo kasoo horjeedda in xukunka lagula wareego awood. Taasoo ka dhigaysa in bulshadii hanti-goosadka ahayd loo rogo bulsho hanti-wadaag iyadoo loo marayo wado ama hab dimuqraadi ah. Hadaba hanti wadaagga noocaan ah wuxuu diidan yahay in hanti goosadka awood lagu afganbiyo ama kacdoon.
Sidaa darteed waxaa caadiya wadamada dimuqrraadiga ah inay inta badan ka jiraan xisbiyo ku abtirsada “Socialism” Hant-wadaag iyo kuwo ku abtirsada “Capitalism” Hanti-goosad. Hadaba xisbiyada ku abtirsada Hanti-wadaagga waxaa loo yaqaan “Social democracy”, “labour party” iyo wixii lamida. Axsaabtaan waxa saldhig u ah mabaadiida guud ee hanti-wadaagga sida in la hormariyo tayada nolosha dadka si loo helo sinnaan iyo caddaalad bulsho taasoo loo marayo in dadka la siiyo caafimaad, guriyo, iyo waxbarasho tayo leh. Dhaqaalaha lagu maal galinayo adeegyadaan waxaa laga bixinayaa canshuurta dawladdu ay dadweynaha ka qaaddo. Waddamada xisbiyadaasi ka jiraan waxaa kamida wadamada Yurubta galbeed, Kanada, Australia, New Zealand iyo koonfurta America.
Communism Socialism ama Revolutionary Socialism. Habkaan dhaqaale wuxuu diidanyahay hantida gaarka loo leeyahay “private property” iyadoo kadhigaysa in hantidoo dhan ay tahay mid lawada leeyahay. Hantida waxaa maamulaya dawladda iyadoo ku daboolaysa baahida bulshada sida cuntada, guryaha, caafimaadka, iyo waxbarashada. Habkaan dhaqaale iyo bulsho wuxuu qabaa in hanti-goosadka “Capitalism” lagu badalo qaab kacdoon oo ka yimid xoogsatada. Wuxuu kaloo kasoo horjeedaa habka kala sarraynta bulshada. Hannaankaan dhaqaale oo loo yaqaan Communism waxaa cilmiyeeyay ama iftiimiyey Karl Marks oo ahaa falsafad-yaqaan Jaarmal ah.
Sanaddii 1917 waxaa waddanka Ruushka ka dhashay kacaan shuuci ah ama Communism oo ahaa kii ugu horreeyay oo aduunka ka dhashay kaasoo hadana burburay 1991. Hayeeshee waxaa maanta jira wadamo ku abtirsada ama isugu yeera communist . Wadamadaas waxaa kamida China, Cuba, North Korea, laws iyo Vietnam. Inkastoo wadamadaas isugu yeeraan inay yihiin wadamo shuuciya hadana waxaa ka jirta hanti gaar loo leeyahay kaasoo meesha ka saaraysa sheegashada ina ay yihiin Wadamo shuuci ah. Wadamada shuuciga ahi waxay caan ku yihiin nidaamka halka xisbi, xisbigaas oo loo yaqaan xisbiga shaqaalaha ama shuuciga iyagoo kasoo hor jeeda inuu wadanku yeesho xisbiyo badan oo tartami kara.
Isku soo wada duuboo guud ahaan fikarradaan dhaqaale ee hanti-wadaagga ma jiro waddan si buuxda u wada hirgaliyey. Sababtoo ah mabaadiida uu ku dhisanyahay qaarkood oon la hirgalin karin marka loo fiiriyo habdhaqanka dhaqaale ee bulshooyinka qaar. Sidaas darteed dal walba iyo bulsho walba waxay hanti-wadaaga u qaateen hab la jaan qaadi kara noloshooda bulsho iyo habkooda dhaqaale. Socialism gaar ahaan Communism ka ayaa waxaa lagu ceebeeyaa inay tahay fikrad aan socon karin. Isagoo markii danbe ka burburay bartamaha iyo bariga Yurub dhamaadkii qanigii 20aad. Waxaa kaloo lagu dhaliilaa inuu hor istaagayo hal abuurka gaarka ah. Sidoo kale guud aahaan hanti-wadaagga waxaa lagu dhaliilaa canshuuraha badan kuwaas oo hor istaaga inuu koro dhaqaalahu.
W/Q: Dheeman Luul 24th April 2020